Aqoon isweydaarsi ku saabsan Xalinta Khilaafaadka oo Garoowe maanta laga furay – SBC
Aqoon isweydaarsi ku saabsan Xalinta Khilaafaadka oo Garoowe maanta laga furay
Posted by Webmaster on December 12, 2011 Comments
Aqoon isweydaarsi looga arinsanayo xalinta Khilaafaadka Beelaha ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Garoowe xarunta Maamulka Puntland.
Aqoon isweydaarsigan ayaa waxaa loo qabtay Culimaa udiinka Deegaanada Puntland iyo Weliba Hogaamiye yaasha Beelaha, isadoona ay soo qaban qaabisay Wasaarada Diinta iyo Awqaafta Puntland isadoo kaashaneysa Hay’ada UNHCR .
Wasiirka Cadaalada iyo Arimaha Diinta Dowlada Puntland Khaliif Xaaji Xasan Ajaayo ayaa sheegay in ay muhiimadu tahay nabad ku wada noolaansho islamarkaana loo baahan yahay in laga aqoon kororsado waxayaabaha ka dhasha khilaafaadka iyo sida looga gudbi karo.
Wasiirka Cadaalada ayaa sidoo kale xusay in Magaalada Garoowe lagu qabandoono Shirka wada tashiga Soomaaliya Sidaasi Awgeedna loo baahanyahay in laga wada shaqeeyo Amaanka iyo Habsami u socodka Nabada .
Sikiastaba ha ahaatee dhowaantan ayaya ahayd markii Wasaarada Cadaalada iyo Arimaha DIinta Dowlada Puntland ay soo gab gabeysay barnaamijyo lagu horumarinayo Nabadda oo ay kala kaashaneysay hay’adaha NCA iyo UNHCR.